Politika Fiarovana fiainan'olona - blackjack77madagascar.com
Tena	/ politika Fiarovana fiainan'olona
Amin'ny fanajana ny fiainany manokana, dia tsy mitaky ny mombamomba rehefa mitsidika blackjack77madagascar.com ianao. Na izany aza, raha any amin'ny Mazava ho azy fa ny vokatra na iray mifandray fanadihadiana na eo amin'ny Mazava ho azy fa ny raharaham-barotra eo amin'ny Site manome ny vaovao ianao, dia voaaro amin'ny tsy nahazoan-dalana fidirana dia ho nampahafantarina ny fomba ny fanazavana no ampiasaina. Ny fanambarana etsy ambany dia manazava ny fomba fanao vaovao momba ny Site.
Ny Statement manarona faritra blackjack77madagascar.com rehetra hita ao amin'ny blackjack77madagascar.com (ny Site). Ny vaovao izay efa nahazo fanangonana vaovao araka ny fanaon'ny ny Site dia ny fanazavana omen'ny olona ho blackjack77madagascar.com, izay tsy avy amin'ny asa, raharaham-barotra na ny asa ny olona (ny Information).
Ny Rohibe hita ao amin'ny Site mety ho ny aterineto sy avy amin'ny hafa Sites, anisan'izany fa tsy voafetra ho amin'ny toerana mpikambana ao amin'ny blackjack77madagascar.com. blackjack77madagascar.com tsy mihazona misy andraikitra ny fiainana manokana, na afa-po politika hafa Internet. Mamporisika anareo izahay mba hijery indray ny fiainana manokana ny misy orinasa politika talohan'ny nanapa-kevitra ny hanaiky na manaiky ny mombamomba. Tsipiriany bebe kokoa momba ny Site Rohibe mety ho hita ao amin'ny Fepetra fampiasana ny Site.
Information isika (blackjack77madagascar.com) hanangona roa no ho latsaka ao Sokajy:
Ny Tracking vaovao, rehefa nangonina ny mpampiasa navigates alalan'ny Site.
Personal Information no nomen'ny mpampiasa ny antony an-tsitrapo.
Tracking vaovao dia nangonin'ny ny Site ho azy sy amin'ny fomba. Dia nanangona ny vaovao mba hijery ny toerana asa, ny nitsidika pejy, ny fotoana lany amin'ny Site ary ny toerana ireo mpitsidika hyperlinked avy.
Ny Site Tracking manangona vaovao momba ny fototry tsy fantatra anarana. Ny Site Tsy nifanerasera misy mombamomba ity angon-drakitra.
Tracking Information dia nangonin'ny ny tranonkala mpizara hazo sy ny mofomamy. Web mpizara hazo hanangona tahiri-kevitra momba ny asa amin'ny Internet. A mofomamy dia fonosana ny fanazavana ampiasaina fanaraha-maso, ary foana fanamarinana tsy azo lavina ny vaovao manokana momba ny Site mpampiasa (vohikala tiany sns). blackjack77madagascar.com mamantatra Avereno fitsidihana ny Site noho ny fanampian'ny mofomamy. Visitor ny solosaina no asaina mofomamy, tsy misy manangona vaovao manokana momba ny mpampiasa ny solosaina, raha tsy nomen'ny manokana ny mpampiasa an-tsitrapo ny tenany tamin'ny fototra.
Tracking Information dia ampiasaina mba hanatsarana ny Site famolavolana sy afa-po amin'ny alalan'ny mandinika ny antontan'isa ny fitsidihana.
By Tena Manokana Information no milaza ny anaran'ny mpampiasa, e-mail, ary koa fanazavana fanampiny izay tsy maintsy atao. Personal Information afaka hangonina ao amin'ny pejy Site sasany ny vahiny raha te hanontany blackjack77madagascar.com ny fanontaniana an-tserasera, rehefa downloading rindrambaiko, na fametrahana didy ho an'ny famandrihana.
Ankoatra izany, dia afaka manokana Information hangonina ho toy ny ampahany amin'ny fifaninanana fampiharana.
Ny Information manokana no ampiasaina amin'ny fampiroboroboana, fitantanana fikasany, anisan'izany fa tsy voafetra ho fanamarinana sy ny fampahafantarana ny mpandresy.
Fampiasana ny Information
Ny Information omena ny Site dia ampiasaina noho izy nanome ny mpampiasa amin'ny asa blackjack77madagascar.com vaovao sy / na ny fisondrotana fa hihevitra mahaliana ny mpampiasa. Ny Information azo zaraina ao anatin'ny mpiasa, mpiasa, mpiantoka na tsy miankina blackjack77madagascar.com hafa mifandray / tsy misy ifandraisany fikambanana sy / na ny mpiara-miasa izay miasa ho an'ny ny Site miaraka amin'ny fomba fijery ny fanatanterahana sy / na nandefa baiko, rebate na loka . Vaovao manokana dia tsy ho zaraina amin'ny blackjack77madagascar.com-pahalalana ivelan'ny toerana, raha tsy heverina ilaina tahaka ny vita ny raharaham-barotra. blackjack77madagascar.com tsy mitazona andraikitra politika fiainana manokana ny toerana hafa, ary ny raviny dia ny foto-kevitra ny fifanarahana mba hitondra ny mombamomba toy ny raharaham-barotra vaovao tsiambaratelo amin'ny fahalalana fa afaka sy tsy azo ampiasaina ho an'ny tanjona hafa afa-tsy ny hanatanteraka ny manokana ary mivantana ny asa.
User ny fiverenan'i adiresy e-mail no ampiasaina mba handefa ny valim-e-mail sy ny fanontaniana azontsika ary koa ny mba hanomezana ny vaovao farany ny asa, ka hampahafantatra momba ny fanampiny fisondrotana sy ny tolotra.
Personal Information mba haseho rehefa ilaina izany mba hanaraka ny lalàna, na tsara isika amin'ny finoana mahita ny asa ilaina, i.e. mba hampihatra na mampihatra ny fepetra, mba hiarovana ny zo, ny fiarovana na ny fananan'ny blackjack77madagascar.com.
blackjack77madagascar.com tsy manavaka ny mety hisian'ny mividy / nivarotra ny / orinasa hafa 'fananana ao amin'ny Mazava ho azy ny fotoana. Ny varotra ny tsara fanahy fijery mpitsidika 'mombamomba ho toy ny raharaham-barotra pananana ihany. Ankoatra izany, ny vaovao azo afindra raha misy, na rehefa blackjack77madagascar.com na ny fananany rehetra dia nividy avy na iharan'ny fanafoanana in Tsy niraharaha.
Tena matihanina rafitra fiarovana dia ampiasaina mba hisorohana ny tsy nahazoan-dalana fidirana, foana angona marina sy miantoka ny fampiasana ny vaovao marina. Ny rafitra ampiasaina amin'izao toerana mifanaraka amin'ny fenitra farany ny fiarovana sy ahitana ilaina elektronika, ara-batana, ary pitantanana fomba fiasa, izay fanampiana mba hiarovana ny vaovao nangonina-tserasera sy mba ho azo antoka sy hiantoka ny fampiasana marina.
Na izany aza, noho ny zava-misy fa tsy misy rakitra dia afaka ny ho tanteraka malalaka ao amin'ny Internet, tsy azontsika atao antoka fa misy vaovao nanaiky ho antsika dia ho tanteraka hiarovana sy azo antoka. Ireo mpampiasa manome ny vaovao amin'ny ny doza. blackjack77madagascar.com tsy tapaka sy Dinihiny dia manombana ny fahaiza-manao ny teknolojia vaovao eo amin'ny fanomezana ny fanampiny fiarovana ny fanazavana.
Data Access ny Tena Manokana
Ny Information nomena manokana ho antsika dia tsy azo ampiasaina na zaraina raha tsy misy voalaza ao amin'ny fanambarana manaraka. Raha tsy misy intsony ny faniriany hahazo vaovao avy amin'ny blackjack77madagascar.com, tsindrio eto raha serasera.
Manan-jò hanova Privacy Statement
blackjack77madagascar.com mihazona ary dia manana zo hanitsy izany fanambarana izany na oviana na oviana. Fiovana ho mahomby tsara eo famoahana ny Site. Mise à jour le Febroary 24, 2009. Nisy tsy miova toetra natao tamin'ny fahatokiana ny amin'ny izany fanambarana izany.